သတင်းကောင်း! သင်ဘယ်သူလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြဘူး။ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 18, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
နာယက ကြီးထွားလာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်း ၀ န်ထမ်းများ၊ အရောင်းအထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၏မယုံနိုင်လောက်အောင်လုပ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည် - Patronpath ဆော့ (ဖ်) ဝဲကို ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားသောအခါ၊ အစားအစာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အွန်လိုင်းမှမှာယူခြင်းထက်သာလွန်သောဥပမာမရှိပါ။
I Patronpath နှင့်စတင်ခဲ့သည် ယခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်။ အဆိုပါအလုပ်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲသောအလုပ်အချို့ကိုကျော်လွှားခဲ့ကြရသည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာ, အတွက်စိန်ခေါ်မှုများရှိပါသည် စားသောက်ဆိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အချို့သောပါရာဒိုင်းပြောင်းလဲနေတဲ့.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့သော POS မူဘောင်မှတစ်ဆင့် POS ရောင်းချသူများနှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းပေါင်းစည်းမှုများကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Enterprise Call Centre ကိုပေါင်းစည်းပြီးပါပြီ။ ယခုအပတ်တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ဂိမ်းပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်မည့် User Interface အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နေပြီ။ ငါတို့မနှေးဘူး၊ ငါတို့မြန်မြန်လုပ်နေတယ်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံး Account Manager ကိုငှားရမ်းနေပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာသားများသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေပြီးနိုင်ငံတစ်ဝန်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဖောက်သည်များကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းများကိုခြေရာခံရန်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည် Basecamp (ဟုတ်တယ်၊ သော Basecamp) နှင့် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်း.
Outlook အားအီးမေးလ်အတွက်အသုံးပြုသည်မှန်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့စတင်သည် မျှဝေသည့်ပြက္ခဒိန်များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုခြေရာခံရန်။ ငါတို့သုံးတယ် Google Docs စာရွက်စာတမ်းများနှင့်စာရင်းဇယားများအပေါ်မျှဝေနှင့်ပူးပေါင်းပါရန်။ ၎င်းသည်အီးမေးလ်ဖြင့် spreadsheet များပို့ခြင်းနှင့်၎င်းတို့အားအားလုံးမွမ်းမံရန်ကြိုးစားခြင်းတို့ထက်များစွာအကျိုးရှိသည်။
Google docs သည်ဝီကီနှင့် Microsoft Office ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ဒိုမိန်းအတွင်းမှ (သို့) သင်၏ဒိုမိန်းပြင်ပမှလူများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းအဆင့်များဖြင့်လူများကိုသင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မတူညီသောစာရွက်စာတမ်းများကိုလက်လှမ်းမီနိုင်သောကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုထက်မနည်းရှိသည် - တစ်ခုစီတွင်စာရင်းစစ်ခြင်းနှင့်သမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ ငါမဆိုကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဆန္ဒရှိချင်ပါတယ်သောမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရင်းအမြစ်ပါပဲ။ သင့်ရဲ့စာရင်းဇယားကိုကျော်စာသားကိုစကားပြောဆိုနိုင်သည်။
Google Apps အကြောင်းကြားပြီးပြီလား
ဒါကြောင့် ... ဒါကြောင့်အချို့သောစိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းယနေ့ဖြစ်ခဲ့သည် NPD က ၇၃% သောလူများသည် Google Docs ကိုတောင်မသိကြကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် တည်ရှိသည်။ ၉၄% သည် web ထုတ်လုပ်မှုအစုံရှိကြောင်းတောင်မသိကြပါ။ Desktop စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းရှိအချို့သောရှေးရှေး စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ tingled အချို့က၎င်းကိုဝဘ်အက်ပလီကေးရှင်းဟုခေါ်ကြသည်။
သူတို့အဘို့ us အတွင်း အ တစ်န်ဆောင်မှုအဖြစ် Software များ စက်မှုလုပ်ငန်း, ဤစာရင်းဇယားငါတို့မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးထားတော်မူ၏။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပင်ကျယ်ပြန့်သှားပွီး။ ပွုံး။ ငါတို့ဒီမှာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူး၊ ငါတို့ကြီးထွားလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကြီးထွားလာတာမဟုတ်ပါဘူး၊
၇၃% ကဂူဂဲလ်စာရွက်စာတမ်းတွေအကြောင်းကိုသိပေမယ့်မသုံးခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့တာလား။ Nope ။
၉၄% ကအွန်လိုင်းကုန်ထုတ်စွမ်းအားဆိုင်ရာ application တွေအကြောင်းသိပေမယ့်မသုံးခဲ့ကြဘူးလား။ Nope ။
အကယ်၍ ၎င်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်စုရုံးရန်ခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်ကြီးထွားရန်အတွက်မယုံနိုင်စရာအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသင်မထင်ပါက ... သင် desktop software နယ်ပယ်တွင်အလုပ်လုပ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာသေခြင်းမဟုတ်ဘဲမွေးဖွားခြင်းပဲ။
၀ န်ဆောင်မှု application တစ်ခုအနေဖြင့် Office Productivity ဆော့ဝဲလ်နှင့်အခြား software များအကြားဆင်တူမှုရှိသည်။ ငါတို့နေရာကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူး။ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဆိုင်ခွဲများသည်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်စနစ်များကိုတည်ဆောက်ရန်သို့မဟုတ် POS ရောင်းချသူကိုအားကိုးရန်လိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ၉၉% သောငါတို့နယ်ပယ်မှာငါတို့ရှိနေတယ်ဆိုတာမသိဘူး။
Tags: စမတ်ကျသောဝက်ဝံအကျဉ်းချုပ်အကြောင်းအရာစိတ်ကူးများကော်ဖီDrupalimavexJason Cohenjoomlaအရောင်းစွမ်းအားslider ကို
18:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 11, 12 တွင်
သဘောတူတယ်။ Office 2.0 သေဆုံးမှုကိုကြေငြာဖို့လူတွေဟာဒီစစ်တမ်းကိုသုံးနေတာဟာထူးဆန်းနေပါတယ်။ ထို့အပြင်စစ်တမ်းတွင်လူမည်မျှရှိသည်ကိုမဖော်ပြထားကြောင်းသတိရပါ များမှာ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပြီး, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရှိမရှိ သင့်.
18:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 11, 28 တွင်
Microsoft Watch ဟုခေါ်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသည်ဤစစ်တမ်းတွင်ပျက်စီးခြင်းနှင့်အမှောင်ထုကျခြင်းတို့ရှိသည်ဟူသောအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားစရာမရှိပါ။ အရမ်းရယ်စရာကောင်းတယ်၊ သူတို့ Live Office အကြောင်းကြားဖူးလား။
ဒီဇင်ဘာ 19, 2007 မှာ 2: 38 AM
Patronpath အကြောင်းဘယ်တော့မှမကြားခဲ့ဘူး၊ link ကိုကျွန်တော်လည်ပတ်ပြီးနောက်မှာငါဘာလုပ်တယ်ဆိုတာအတိအကျမရသေးဘူး။
ဒီဇင်ဘာ 19, 2007 မှာ 8: 24 AM
ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့ site ကိုလုံးဝကြောက်မက်ဘွယ်သောပါ! (ကျွန်တော်မတိုင်မီကလုပ်ခဲ့တာပါ) ဒီ site ကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးပါပြီ။ အခုအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လိုက်ပါပြီ။
ဒီဇင်ဘာ 20, 2007 မှာ 2: 21 AM
အလွန်အားတက်စရာအသံ! ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပိုပြီးခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတာပါ Wrike.com လာမည့်နှစ်တွင်မြှင့်တင်ရေး🙂ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!